Car asụ egbe na-ebunye ya na &lọ ọrụ ya - Ndị na-emepụta egbe ụgbọ ala China
Auto nhicha Ngwaahịa
Auto Wiper Mmezi Ngwá Ọrụ
Car polishing na ịme waksị Machine
Ugbo ala asha egbe
Auto Mpụga Ngwa
Car ụlọ Pedal
Umbrella na Car Window emebi
Auto esịtidem Ngwa
Car ekwentị jidere
Ohiri Isi Car
Car agụụ Cleaner
Auto Nchekwa Ngwaọrụ
Nchekwa onwe windo emebi
Omogbọala Mgbaaka omogbọala
Car Air mgbapụta
Car ugogbe ụgbọ ala Piel Anti-ntigbaa Sun Visor
Nchekwaa Ngwaahịa Ezumike
Ihu Igwe Ihu Igwe Parasol
Sungbọ ala Sunshade
Auto Winter Ngwaahịa
Car Snow shọvelụ na ahịhịa
Auto sterịn ụkwụ anọ Booster ...
Umbrella na Nchekwa onwe Window B ...
3413 nkpuchi mpịaji mpịachi
Car ụlọ Pedal 7904
Nnukwu Ugbo ala Na-asacha Egbe 8023T-8
5-mpempe akwụkwọ nke egbe mmiri niile, igwe egbe mmiri, nnukwu ụlọ ịsa ahụ ụgbọ ala, ezigbo ngwa ngwa, usoro ịgba 8, 8023T-8SBT
Multi-function: ụgbọ ala asacha ọrụ, ike dị ọcha ụgbọ ala; ịrụ ọrụ ịgbara mmiri, dozie mmiri kwesịrị ekwesị iji mee ka okooko ndị ahụ nwee mmiri; ọrụ ịsa ahụ maka anụ ụlọ, dozie usoro mmiri, jiri mmiri dị nro na-asa ahụ.
8 iche iche nke mmiri ịgba: Site ukpụhọde na multi-ọrụ egbe isi, 8 mmiri ịgba nakawa etu esi nwere ike ghọtara, nke nwere ike ji mee ihe dị iche iche ịsa nzube.
Ihe siri ike: A na-eji akwa zinc alloy mee ihe dị mkpa nke mmiri ahụ, nke siri ike ma sie ike karị. Ejiri roba TPR kpuchie aka ahụ. E ji ọla kọpa mee nkwonkwo ọkpọkọ ahụ, nke na-adịgide adịgide karị.
Car ụfụfụ Saa Gun 8023-8P
All-metal ụfụfụ mmiri egbe, ụgbọ ala na-asacha mmiri egbe, ezinụlọ elu nsogbu, ụgbọ ala na-asa ngwá ọrụ, mma na-asachapụ ngwá ọrụ, 8 ịgba nakawa etu esi 8023-8PSBT
Multi-function: ụgbọ ala saa ọrụ, integrated ụfụfụ ihicha; arụ ọrụ ịgbara mmiri, gbakwunye nsị nke ụmụ ahụhụ, dozie mmiri kwesịrị ekwesị ka ọ gbaa mmiri okooko osisi ma chụpụ ụmụ ahụhụ; saa anu ulo, tinye nchacha, dozie mmiri ahụ, ma were nwayọ mmiri na-agba anụ ụlọ.
Car ụfụfụ Saa Gun Set 8023-8P
5-mpempe akwụkwọ nke egbe mmiri ụfụfụ niile, igwe egbe mmiri, nnukwu ụlọ ịsa ahụ ụgbọ ala, ezigbo ngwa ngwa, usoro ịgba 8, 8023-8PSBT
Anyị ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na 2006, ụlọ ọrụ bụ ọkachamara akpakanamde ọnọde ụlọ ọrụ tụnyere mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ. Ọ na-elekwasị anya na nyocha na mmepe nke akụrụngwa akụrụngwa. Ọ nwere ihe karịrị ikikere 80.